के गर्ने यदि मेरो आईफोन, आईपड टच वा आईप्याड टर्न छैन आईफोन समाचार
के गर्ने यदि मेरो आईफोन, आईपड टच, वा आईप्याड सक्रिय छैन
यो धेरै सामान्य छैन तर यदि यसले कुनै इलेक्ट्रोनिक उपकरणले चालु गर्न चाहँदैन भने यस्तो लाग्दछ भने यसले हामीलाई धेरै छक्क पार्नु पर्दैन। यो अझ अनौंठो हुनेछ यदि हामी आईफोन, आईपड टच वा आईप्याडको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं जुन केहि महिना पुरानो हो। यदि हो भने, के उपकरण टुटेको छ? ठिक छ, यो सँधै एक सम्भावना हो, तर हामीले यसलाई क्षतिग्रस्त बनाउनु अघि हामीले केही परीक्षणहरू गर्नुपर्नेछ। यस लेखमा हामी तपाईंलाई अनुसरण गर्ने चरणहरू देखाउनेछौं यदि तपाईंको हो भने आईफोन, आईपड टच, वा आईप्याड सक्षम हुँदैन.
1 १० सेकेन्डको लागि निन्द्रा बटन थिच्नुहोस्
2 नेटवर्क सकेटमा आईफोन जडान गर्नुहोस्
3 एक रिबुट बल गर्नुहोस्
4 पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
5 एप्पल समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
१० सेकेन्डको लागि निन्द्रा बटन थिच्नुहोस्
यस्तो सम्भावना छ कि एक इलेक्ट्रोनिक उपकरणले सानो समस्या भोग्दछ जुन यसलाई सामान्य रूपमा जस्तो गरी फेरि चालू गर्नबाट रोक्छ। यदि हामी सामान्यतया दुई सेकेन्डको लागि स्लीप बटन थिचेर आईफोन, आईपड टच वा आईप्याड खोल्ने प्रयास गर्छौं र हामी देख्छौं कि यो त्यस्तो प्रतिक्रिया देखाउँदैन, हामीले प्रयास गर्नु पर्ने पहिलो कुरा प्रेस थिच्नु हो। केही बेरको लागि निन्द्रा बटन। यसले सानो बनाउँदछ रिसेट गर्नुहोस् र यदि समस्या महत्वपूर्ण छैन भने, तपाईं सम्भवतः यसलाई सामान्यमा फर्काउन सक्नुहुन्छ।
नेटवर्क सकेटमा आईफोन जडान गर्नुहोस्
यो सँधै हास्यास्पद हुन्छ: हामी लाग्छौं कि हाम्रो उपकरणको ब्याट्री छ, तर हामी गलत छौं। वास्तवमा ब्याट्री सक्यो, केही यस्तो पनि हुन सक्छ कि यदि यो अधिक बाँकी छैन भने, हामी सोच्छौं कि यो होल्ड हुन्छ तर पृष्ठभूमि प्रक्रियाले यसलाई हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा छिटो खपत गरेको छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि पूरा ब्याट्री समाप्त भएको छ भने हामीले गर्नु पर्छ केहि मिनेट को लागी चार्ज गर्नुहोस् हाम्रो iOS उपकरण प्रतिक्रिया अघि। यदि यो ब्याट्री सकिसकेको छ भने, हामी एक छवि देख्दछौं जसले आईफोनको स्क्रिनमा स indicate्केत गर्दछ, चाँडै नै हामीले चार्जिंग ध्वनि सुन्नेछौं र आईफोन, आईपड टच वा आईप्याड खोल्नेछ।
एक रिबुट बल गर्नुहोस्
यदि हामी यसलाई खोल्न सक्दैनौं र नेटवर्क आउटलेटमा जडान भएको केही मिनेट पछि उपकरणले चालु गर्दैन भने, हामी जाँच गर्नेछौं एक resएट, तर केहि बढी आक्रामक। यो पुनः सुरु गर्न बाध्य पार्दैछ, जुन हामी एकपटक एप्पल नदेखेसम्म स्टार्ट बटन र बाँकी बटन थिचेर हासिल गर्दछ।
यो एक रीबुट बल गर्न भनिन्छ ती साना समस्याहरूको %०% सम्म समाधान गर्दछ अर्को तरिकामा कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीलाई थाहा छैन। यदि केहि सेकेन्ड पछि हामी एकै समयमा दुबै बटनहरू प्रेस गर्यौं भने हामी एप्पल देख्दैनौं, हामीले अर्को बिन्दुमा जानुपर्नेछ।
यो प्राय: कुनै पनि समस्याको लागि प्रायद्वीप चरण हो। यदि हामीले सबै कुरा गर्‍यौं र उपकरण सकृय छैन भने हामीले प्रयास गर्नुपर्नेछ उपकरण पुनः भण्डारण गर्नुहोस्। तर यदि हामी यसलाई सक्रिय गर्न सक्दैनौं भने हामी यसलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने? यो वास्तवमा धेरै सरल छ। हामी यसलाई निम्न अनुसार गर्नेछौं:
हामी केबललाई आईफोन, आईपड टच वा आईप्याडसँग जोड्दछौं।
हामी थिच्दछौं र स्टार्ट बटन छोड्दैनौं।
अब हामी केबलको अर्को छेउमा कम्प्युटरमा कनेक्ट छौं। म्याक वा पीसीले पत्ता लगाउनेछ कि हामीले रिकभरी मोडमा उपकरण जडान गरेको छ, त्यसैले यसले हामीलाई बताउँछ र यसलाई पुनर्स्थापनाको विकल्प प्रदान गर्दछ।
एप्पल समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
यद्यपि हामी यसलाई तेर्सो-पार्टी सेवा द्वारा सँधै मर्मत गर्न सक्दछौं, यो सँधै लायक हुन्छ। आधिकारिक SAT लाई सम्पर्क गर्नुहोस्, विशेष गरी यदि हाम्रो आईफोन, आईपड टच वा आईपैड वारेन्टी अन्तर्गत छ। यदि यो होईन भने, हामीले दिमागमा राख्नु पर्छ कि एप्पलको डायग्नोस्टिक सफ्टवेयरले समस्या के हो भनेर बताउन सक्दछ जुन हाम्रो उपकरणलाई खोल्नबाट रोक्दै छ। थप रूपमा, एप्पल सामान्यतया एकदम इमानदार हुन्छ र हामीलाई पहिले नै थाहा छ कि अनौपचारिक सेवामा के हुन सक्दछ: तिनीहरूले हामीलाई बताउन सक्छन् कि योसँग यो भन्दा बढी छ र एक अनधिकृत मर्मत आधिकारिकको रूपमा समान मूल्यको लागि बाहिर आउन सक्छ। तर कुनै पनि अवस्थामा यो पनि सत्य हो कि हामी ईमान्दार तेस्रो-पक्ष सेवा पाउन सक्दछौं र यो कि मर्मत हामी यसको आईफोन, आईपड टच वा आईप्याड एप्पलमा लग्यौं भने यो भन्दा कम मूल्यमा आउँछ।
के तपाइँसँग यो समस्या छ कि तपाइँको उपकरणलाई खोल्नबाट रोकेको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » के गर्ने यदि मेरो आईफोन, आईपड टच, वा आईप्याड सक्रिय छैन
Jaume लोपेज भन्यो
म एक ड्रप टेस बनाउने जोड्ने छु, र यसलाई YouTubet मा अपलोड! 😀
Jaume López लाई जवाफ दिनुहोस्
ह्यारिसन गोन्जालेज सान्ता भन्यो
ह्यारिसन गोन्जालेज सान्तालाई जवाफ दिनुहोस्
यो मेरो लागि काम गरीरहेको छ तपाईंलाई धेरै धन्यवाद। तपाईं उत्तम likes० लाईकहरू हुनुहुन्छ: v
नमस्ते, मलाई मद्दत चाहिन्छ, मेरो आईफोन कम ब्याट्री लोगो र चार्जमा जाँच गरियो, म के गर्ने?
जर्मन ह्याकरले आईफोनबाट आएको कलमा जासुसी गर्ने तरिका पत्ता लगाउँदछ
आईओएस .9.3.1 ..9.2.1.१ बनाम आईओएस .XNUMX .२.१: प्रदर्शन परीक्षण र ब्याट्री जीवन